Esi emeghe faịlụ RAR na Mac na mmemme ndị a n'efu | Nzukọ Ekwentị
Esi emeghe .rar faịlụ na Mac: mmemme efu
Jordi Gimenez | | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Otu ọrụ anyị na-emekarịrị n'ihu Macs ma ọ bụ PC anyị bụ tọgharịa faịlụ. Mgbe anyị ga-arụ ọrụ a enwere ụzọ dị iche iche iji mezuo ya mana anyị na-anọkarị otu, otu nke na-enye anyị nhọrọ kachasị mma na nke kachasị.
N’echiche a anyị ga-ekwu nke ahụ maka Mac ọrụ ọ dị mfe unzip rar, ya mere na-enweghị mkpa maka mmemme nke atọ anyị nwere ike mepụta ọrụ a. Ma taa, anyị bịara igosi gị ụfọdụ mmemme ndị ọzọ a nwere n'efu nke anyị nwere ka anyị soro ha.
1 Mepee RAR na Mac
1.3 RAR wepụ na expander
Mepee RAR na Mac
Ihe ị na-emeghe faịlụ rar na Mac nwere ike ịdị mfe karịa ka ị chere na anyị nwere ike iji ngwaọrụ anyị nwere n'ụdị ngwa. N'echiche a, ịtọghe RAR na Mac adịghị mgbagwoju anya. Taa, anyị ga - egosi ụfọdụ ngwa ọrụ ọtụtụ ndị ọrụ Mac na - eji ma enwere onwe ha, mana onye ọrụ ọ bụla nwere ngwa ha ya mere na ọ dịghị mkpa ka ị jiri ndị sitere na listi anyị chọrọ, ị nwere ike họrọ nke kachasị amasị gị ma ọ bụ otu ọ dị gị n’obi banyere ya.
Nchịkọta nke ngwa ndị a dịgasị iche dabere na onye nrụpụta na ụfọdụ na-enye ọtụtụ nhọrọ n'ime ngwa ahụ n'onwe ya, ndị ọzọ na-enye ọsọ ọsọ ka mma mgbe ọ na-abịa ịtọghe ma ọ bụ mepee faịlụ ndị a, wdg. Di iche iche di nma ma karie ugbu a anyị nwere ike iji ụfọdụ iPad ngwa na Big Sur sistemụ.
Anyị malitere na anyị enweghị ike ịme ya n'ụzọ ọ bụla karịa na ngwa Unarchiver. Nke a ngwa bụ otu n'ime ndị kasị eji Apple na Mac ọrụ na- decompress ụdị faịlụ niile: RAR, Zip, 7-Zip, Tar, Gzip, wdg. N'okwu a, ozugbo ebudatara ngwa ahụ, anyị ga-abanye na faịlụ abịakọrọ wee pịa oghe.
Onye nrụpụta ahụ bụ MacPaw ma yabụ ngwa ahụ na-emelite mmelite oge niile. Na nke a ngwa bụ ugbua dakọtara na ndị ọhụrụ version nke anyị Mac sistemụ, na macOS Big Sur.
Ngwá ọrụ ọzọ nke na-adaghị na ndepụta nke ndị dị maka ndị ọrụ chọrọ mpikota na decompress ọtụtụ faịlụ. A kpam kpam free ngwa na-eme ka ọ dịrị anyị mfe decompress faịlụ na formats Zip, RAR, 7-zip, Tar, Gzip na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dị ka ngwá ọrụ gara aga, Decompressor na-akwado faịlụ ndị nwere paswọọdụ ma ọ bụ yiri na-enye ohere ificationsma Ọkwa na emelitere imewe ka ọhụrụ nsụgharị nke Apple sistemụ.
RAR wepụ na expander
Nke a bụ ihe ọzọ n’ime ngwa ndị kacha ochie dị na ngwa ngwa Mac ma ọ na - eme ka ọ dịrị anyị mfe decompress faịlụ na RAR. N'okwu a, ngwa ahụ bụ ihe mgbe ochie ma ọ naghị enye ọtụtụ ndị ọzọ dị ka ndị gara aga, mana RAR extractor na Expander bụ ezigbo unzipping ngwaọrụ.
The interface nke a ngwa dịtụ obere ịkpachara anya ma ọ nwere ike ịbụ bara uru n'ihi na ndị ọrụ ndị na-achọghị ma ọ bụ enweghị ike imelite ha Macs ka ọhụrụ nsụgharị. Ya mere maka ndi nwere ochie macOS nsụgharị nke a nwere ike ịbụ ezigbo ngwá ọrụ iji kpughee RAR.
N'okwu a ma mechaa obere mkpokọta nke ndị mgbagha na anyị na-ahụ na ngwa ngwa Apple maka Mac, anyị chọrọ ịsị nke ọma otu n'ime ndị kasị eji ma nke ugbu a enweghị mmelite, StuffIt Expander.
N'okwu a, akụrụngwa zuru oke ma na-enye onye ọrụ ohere ịmepe faịlụ RAR ọ bụla site na iji otu ịpị, mana interface ochie ya na "ịhapụ" onye nrụpụta mere ya nhọrọ ikpeazụ maka anyị. Ngwaọrụ bụ kpam kpam free maka Mac ọrụ na anyị nwere ike iji ya na ụdị ọ bụla nke macOS, mana interface ya dị ntakịrị.
N'ezie, ụdị ọrụ ndị a iji dechapụ RAR na ụdị ụdị ndị a yiri nnọọ ibe ha, mana ị ga-eburu n'uche nkọwa ụfọdụ nke interface ahụ, ịdị mfe nke iji yana karịsịa mmelite ndị nrụpụta. Na nke a, nke mbụ nke ngwa ọdịnala nke anyị gosipụtara n'isiokwu a na-eweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uru niile nke ụdị ngwa a na nke abụọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ndị ọzọ nwere ike ịba uru maka ndị ọrụ ka ha na-arụ ọrụ ahụ mana n'ikpeazụ ha nwere interface ochie, nke a na-eme ha ezigbo ngwaọrụ maka ndị nọrọ na nsụgharị ochie nke sistemụ Apple.
Ihe ọ bụla ịdị adị nke ngwaọrụ ndị a mee ka ọ dịrị anyị nfe ịbelata nke ukwuu niile ụdị RAR faịlụ na akwụkwọ, n'ihi ya, anyị nwere ike iji ha n'oge ọ bụla na ọnọdụ ikwado ọrụ nke imeghe ụdị akwụkwọ ọ bụla na-abịarute na Mac na usoro a. Hapụ anyị n’ime nkọwa nke ị na-eji na ihe kpatara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Esi emeghe .rar faịlụ na Mac: mmemme efu
Ebe ibudata egwuregwu Disney kacha mma maka PC
Cloudgwé ojii Nchekwa Nchekwa: Ihe Ọ Bụ, Akụkụ na Ihe Nlereanya